Izindaba - Izinhlobonhlobo nokusebenza kwamabhodlela engilazi
Amabhodlela engilazi asetshenziselwa kakhulu ukufakwa kwemikhiqizo ezimbonini zokudla, iwayini, isiphuzo, okwenziwa ngemithi nezinye izimboni. Amabhodlela engilazi namakani anokuqina okuhle kwamakhemikhali futhi awathelelani ngaphakathi. Ziphephile ukuzisebenzisa ngenxa yokuqina komoya nokumelana nokushisa okuphezulu. onokwethenjelwa. Ibhodlela lengilazi lesitsha sokupakisha isiphuzo sezwe lami, ingilazi futhi luhlobo lwezinto zokupakisha ezinomlando omude. Njengoba izinto eziningi zokupakisha zithululela emakethe, iziqukathi zengilazi zisesikhundleni esibalulekile ekupakisheni isiphuzo, okungahlukaniswa nezici zaso zokupakisha ezinye izinto zokupakisha ezingakwazi ukuzithathela indawo.
Eminyakeni yamuva nje, ukufuneka kwasekhaya kwamabhodlela engilazi namakani kuqhubekile nokwanda, kepha izidingo zekhwalithi yomkhiqizo (Isici) nobungako (Ikhwalithi) nazo sezikhuphukile. Senze ngcono ukwakheka kwamabhodlela engilazi namakani ukujwayela okuhlukahlukene Ngokufakwa okuhlukile kwemikhiqizo, izinga lomkhiqizo kanye nenani elengeziwe lithuthukisiwe, isabelo semakethe sandisiwe, nokuncintisana kwemboni yamabhodlela engilazi yezwe lami kuyo yonke imakethe kwenziwe ngcono.
Kunezinhlobo eziningi zamabhodlela engilazi namakani, ahlukaniswe aba yindilinga, okusaqanda, isikwele, unxande, futhi ayisicaba ngokusho kwawo. Phakathi kwabo, iningi liyindilinga. Ngokobungako bomlomo webhodlela, kukhona umlomo obanzi, umlomo omncane wokufafaza umlomo, njll, ngokwendlela yokubumba, kunamabhodlela abunjiwe namabhodlela okulawula. Ngokuya ngesigaba sombala, kukhona okungenambala futhi okunemibala. Ukuhlukaniswa okungenhla akulona oluqinile. Kwesinye isikhathi uhlobo olufanayo lwamabhodlela luhlala luhlukaniswa lube izinhlobo eziningana, futhi ngokwentuthuko yomsebenzi nokusetshenziswa kwamabhodlela engilazi namakani, okuhlukahlukene kuzokwanda usuku nosuku.
Ukupakisha kwamabhodlela engilazi okwelapha kusondelene kakhulu namabhodlela engilazi okwelapha. Ngokuvamile kunezinhlobo ezimbili zokupakisha zamabhodlela engilazi okwelapha. Elinye ukupakisha okujwayelekile emabhokisini amakathayela, kanti okunye ukushisa kusetshenziswa ifilimu yePVC noma ye-PE. Nciphisa ukupakisha, kanye nenani elincane lokupakisha ipallet. Ibhodlela lengilazi lesitsha sokupakisha isiphuzo sezwe lami, ingilazi futhi luhlobo lwezinto zokupakisha ezinomlando omude. Njengoba izinto eziningi zokupakisha zithululela emakethe, iziqukathi zengilazi zisesikhundleni esibalulekile ekupakisheni isiphuzo, okungahlukaniswa nezici zaso zokupakisha ezinye izinto zokupakisha ezingakwazi ukuzithathela indawo. Ngokombono wokuvikelwa komkhiqizo nezidingo zenhlanzeko, ikhwalithi yokufakwa kokushisa okunciphisayo nokupakishwa kwepallet kuphakeme kakhulu kunokufakwa okujwayelekile kwebhokisi. Manje isithuthuke yaba yifilimu le-PE elincishiswe ukushisa lifakwa kwikhathoni, elihlanzekile nelinenhlanzeko, futhi elingahlanganiswa njengelinyumba (ukhunta). Lokhu futhi kuyinkomba yokuthuthuka yesikhathi esizayo yamabhodlela engilazi yezokwelapha.
Izidingo eziqinile zokuvikelwa kwemvelo zenza ingcindezi yamabhodlela engilazi iphakeme kakhulu. Amabhodlela engilazi, abakhiqizi bamabhodlela abanengilazi, nemikhiqizo yengilazi banolwazi ekwakhiweni nasekuthengisweni kwamabhodlela ahlukahlukene engilazi (Ukuthengisa) Ngoba amabhodlela engilazi namakani asobala futhi azinzile ngokwamakhemikhali (Incazelo: izinze futhi izinzile; Alukho ushintsho) Ukusebenza okuhle, intengo ephansi , ukubukeka okuhle, ukukhiqizwa kalula (Ukukhiqiza) ukukhiqizwa, kungaphinda kusetshenziswe kabusha izikhathi eziningi, njll., Ngakho-ke yize kunomncintiswano wezinye izinto zokupakisha (ukuncintisana), abakhiqizi bamabhodlela engilazi basenezinye izinzuzo Izici izinto zokupakisha ezingakwazi ukuzithathela indawo. Ibhodlela lengilazi lesitsha sokupakisha isiphuzo sezwe lami, ingilazi futhi luhlobo lwezinto zokupakisha ezinomlando omude. Njengoba izinto eziningi zokupakisha zithululela emakethe, iziqukathi zengilazi zisesikhundleni esibalulekile ekupakisheni isiphuzo, okungahlukaniswa nezici zaso zokupakisha ezinye izinto zokupakisha ezingakwazi ukuzithathela indawo.
Eminyakeni yamuva nje, ngesidingo esikhulayo samakhasimende sokucubungula okujulile kwemikhiqizo yokupakisha amabhodlela engilazi (Umkhiqizo), ukuphrinta kwesilika kwesikrini nokubhaka izimbali ebusweni bezitsha zezingilazi sekuyinsakavukela, futhi ngezidingo zekhwalithi nezemvelo zokuphrinta usilika, uyinki wephepha wokuphrinta nopende ekhaya nakwamanye amazwe Ngokuqina okuqinile, faka ingcindezi enkulu ezinkampanini eziningi zokucubungula izitsha zamabhodlela.
IBuddhism yethulwa eChina ivela kuHan Dynasty, yabuye yathuthuka futhi yachuma ngesikhathi se-Wei neJin Dynasties. Igolide, isiliva, i-amber, i-coral, itshe lamatshe, i-glaze enemibala, ne-agate zibalwe njengeziNgcebo Eziyisikhombisa ZobuBuddha. Ngaphezu kwalokho, ubaba nendodana kaCao Cao bakhuthaza ukungcwatshwa okuncane, okufana nomyalelo wokufa kukaCa Cao, "uhlangane nesikhathi, kungabikho golide negugu le-jade", ukuze uhlelo lokungcwaba i-jade olwakhiwa eHan Dynasty ngaphezulu Iminyaka engama-400 yaphela, futhi amaparele avundululiwe nezinye izinto nazo zawa kakhulu. Amabhodlela engilazi abonakalayo asetshenziselwa ukugqoka izinsalela njengeminikelo yamaBuddha, futhi inani elikhulu lobuhlalu beglasi lenziwa ukuhlobisa izithombe namathempeli kaBuddha, okwathi ngezinga elithile kwabonisa ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bengilazi ngaleso sikhathi.